Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. Amin'ny maha iray amin'ireo mpanamboatra matihanina eran-tany amin'ny mivelatra isan-karazany ny mpanao pirinty sy ny birao consumables famatsiana, dia mandray haben'ny avonavon'i eo amin'ny famoronana zava-baovao indrindra sy Functional vokatra. Office filàna dia be ary isika no manolo-tena ny fihaonana rehetra.
TIANSE no tena marika ny birao fitaovana eo ambany fanevan'ny Guangzhou Sanheng Information Technology Co., Ltd. izany vola manasongadina-fahombiazana, mitondra zava-baovao famolavolana, manan-karena sy ny isan-karazany loko safidy. TIANSE marika efa niditra ny tsena amin'ny fomba ofisialy nanomboka tamin'ny 2014, misahana manokana ny birao consumables fanontam-pirinty, izay nivarotra tamin'ny Tmall.com, JD.com sy ny e-varotra sehatra. Efa lasa nisafidy haingana fanontam-pirinty consumables mpamatsy marika eo amin'ny an-toerana e-varotra tsena.
Miaraka amin'ny famokarana fototra nanarona 35.000 metatra toradroa any Huizhou, dimy lehibe trano fanatobiana entana ao Shina amin'ny tanteraka trano fanatobiana entana toerana hatramin'ny 10.000 metatra toradroa, 193 matihanina mpanjifa foibe, ary mihoatra ny 2.300 miara-miasa baovao ny firenena, ny orinasa dia afaka manome antoka mafy sy marim-potoana fanaterana ary manome ny matihanina sy ny mpanjifa amin'ny fiheverana rehefa avy-fanompoana varotra, tena tonga saina ny iray-mijanona fanompoana.
Manan-karena traikefa amin'ny orinasa sy ny fanaraha-maso ny kalitao dingana henjana, dia mifantoka amin'ny zavatra ataontsika ary manao fanoloran-tena mba hahazoana antoka manetriketrika ny mpanjifa ihany no handray ny vokatra faran'izay tsara.
Amin'ny miovaova famatsian rojo, mpanjifa-mirona hevitra sy matihanina mpanjifa ekipa, dia manome rehetra-manodidina sy fiheverana mialoha fivarotana, in-fivarotana sy Ankehitriny-amidy tolotra rehetra ny mpanjifa ny fotoana rehetra.